Ise egwuregwu kacha mma nke Dragon Ball maka gam akporo | Gam akporosis
Dragọn Ball bụ usoro ihe nkiri Japanese nke Akira Toriyama kere, usoro nke ewepụtara na 1984 na taa, ihe karịrị afọ 30 ka e mesịrị, na-aga n'ihu n'ime obi ọtụtụ ndị ọrụ na mgbakwunye na ịga n'ihu inweta ụmụazụ ọhụrụ kemgbe ọtụtụ afọ n'agbanyeghị ogologo ndụ ya.
Ihe odide ndị Japan nke mbụ bụ Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z Kai, na Dragon Ball Super. N’ime afọ ndị a niile, ọnụ ọgụgụ nke isi dị 519 na mpịakọta 42. Na mgbakwunye na usoro ndị a ma ama, a na-agbakwa ihe nkiri (na-enwe obere ihe ịga nke ọma) mana ebe ha na-aga n'ihu Ọ bụ nnọọ ugbu a na ụwa nke videogames.
Na Storelọ Ahịa Play anyị nwere ike ịchọta egwuregwu na ngwa nke ụdị dị iche iche metụtara isiokwu nke Dragon Ball, agbanyeghị, ọ bụghị ha niile na-enye anyị isiokwu metụtara manga a karịa igosi anyị agwa ndị yiri ya, n'ihi nwebisiinka ha dị site na Bandai Namco.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe ndị na- kacha mma Dragon Ball egwuregwu dị na Storelọ Ahịa Play, M na-agba gị ka ị na-agụ.
1 Akụkọ akụkọ ntụrụndụ dragọn
2 Dragọn Naa Z Dokkan Battle
3 Dragon Ball: Z Super Goku Agha
4 Ọgụ Stickman: Dragọn Legends Agha
5 N'èzí Storelọ Ahịa Play
Akụkọ akụkọ ntụrụndụ dragọn
Legend Dragon Ball bụ egwuregwu emere RPG na-enye anyị 3D animations na epic visual mmetụta nke ọ na-agwa anyị akụkọ mbụ nke agwa kere Akira Toriyama, ihe omimi Saiyan a maara dị ka Shallot. N'ime aha a anyị na Shallot sonyere ndị edemede kachasị amasị iji nyere aka weghachite ncheta gị ma chekwaa ụwa.
N'ime aha a anyị hụrụ Goku, Vegeta, Osisi, Piccolo, Krillin, Gohan, na - etinye njikwa ntanetị na ntanetị na usoro egwuregwu dị mfe nke na - agwakọta ihe ngosi na ihe ngosi 3D dị elu.
Enwe ihe nke lucha anime 1v1 megide ndị egwuregwu enyi ma ọ bụ ndị na-asọ mpi Dragọn Naa si gburugburu ụwa na-ebi ndụ PVP agha. Soro na ogo egwuregwu na ọkacha mmasị gị dragọn BALL odide na irite ogo isi na ụgwọ ọrụ. Ma ọ bụ tụọ ike gị n'ọgụ a na-atụghị anya ya maka egwuregwu na ndị egwuregwu nwere ike yiri ya.
Dragọn Naa Akụkọ Ochie dị maka gị budata n'efu ma gunyere nzụta ngwa-ahịa sitere na euro 0,99 ruo euro 79,99. A kwadoro aha a maka ndị gafere afọ 13.
Dragọn Naa Z Dokkan Battle
Aha a na - enye anyị otu n’ime kacha mma Dragon Ball mobile gaminggba Cha Cha ahụmahụ maka ekwentị mkpanaaka. Nke a Dragọn Naa anime edinam mgbaghoju anya egwuregwu atụmatụ mara mma 2D atụ oyiyi na animations setịpụrụ na a Dragon Ball ụwa ebe usoro iheomume ghọọ ọgba aghara, ebe Dragon Ball odide nke gara aga na ugbu nsogbu. Ihu na ihu na ọhụrụ na-akpali akpali agha.
Dragọn Naa Z Dokkan Agha na-enye ọhụụ na-enye ume ọhụrụ na ịdị mfe iji rụọ ụdị egwuregwu anime epic ukwuu na-eri ahụ anime agha. Mgbe ị dị njikere ma kwadoro, wepụ ndị iro gị na Super Attack dị ka Super Saiyan Goku's Kamehameha na ọtụtụ ndị ọzọ iji zipu ndị iro na-efe.
Nyere aka weghachite usoro iheomume nke Dragon Ball site na ọnọdụ Quest. Ahụmahụ ewu anime na-ewu ewu na-ewu ewu na mkpụrụedemede Dragon Ball ọhụrụ na nke ochie. Dragọn BAll Z Dokkan Batlle bụ dị maka nbudata n'efu ma na-agụnye nzụta ihe eji eji ngwa, sitere na euro 0,99 ruo euro 49,99.
Iji nwee ọ enjoyụ na aha a, ama achọrọ iji wụnye ya ga-ejikwa ya Android 4.4 ma ọ bụ mgbe e mesịrị. Egwuregwu a, dịka nke gara aga, Bandai Namco mepụtara ya.
Developer: Ụlọ ọrụ Bandai Namco Entertainment Inc.
Dragon Ball: Z Super Goku Agha
Dragon Ball: Z Super Goku Battle na-enye anyị otu kachasị mma ahụmịhe mkpanaka mkpanaka nke isiokwu a dị na Storelọ Ahịa Play, yana njikwa na-enweghị nghọta na ọgụ ọgụ na ikike ịkpọ ikike, jikọtara ya Ihe ngosi di elu na 2D di elu.
Aha a anyị tinyere onwe anyị na akpụkpọ ụkwụ nke Legendary Saiyan kakarot ma ọ bụ onye ọzọ Z na-alụ ọgụ megide ndị iro ya niile sitere na Dragon Ball Z, Dragon Ball KAI na Dragon Ball GT. N'oge egwuregwu ị nwere ike ịmepụta otu ọkacha mmasị gị nrọ otu ma ị nwere ike iji ikike niile nke agwa ọ bụla merie agha na ụgwọ ọrụ gị.
Dragon Ball: Z Super Goku Battle dị maka budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi ma ọ nweghị ụdị ịzụta ihe dị n'ime ngwa, yabụ n'adịghị ka ndị gara aga, anyị nwere ike ịnụ ụtọ aha a n'ọtụtụ ebe na-enweghị ike ịmanye ịzụrụ ihe dịka a ga - asị na ọ mere na aha abụọ gara aga.
DBS: Agha Super Goku
Developer: Pixelers. Ltd.
Ọgụ Stickman: Dragọn Legends Agha
Egwuregwu Stickman enwere ọnụọgụ dị ukwuu na Storelọ Ahịa Play ma o doro anya na ha enweghị ike ịhapụ otu metụtara isiokwu a. N'isiokwu a anyị ga - achọpụta akụkọ banyere Stickman Warrios, nka agha, nka kachasị na ọgụ otu na enweghị izu ike. Ọgụ Stickman gụnyere ụdị egwuregwu 5:
Arena- Ihu ọkacha mmasị gị onye iro onye isi-na na a otu na-otu agha. A ga-ekpebi onye mmeri mgbe ọ merisịrị ndị iro 8 n'ọgụ.
Paignkpụrụ mkpọsa- gbara ọtụtụ villains, ị ga-anwa imeri ha ka ha bụrụ dike na-egbu egbu.
Kpụrụ akụkọ ihe mere eme: Map 9, ọkwa 15, site na ọkwa dị mfe na ọkwa siri ike, ọpụrụiche pụrụ iche. Oh ee, ndị isi dị ize ndụ mgbe nke ahụ gasịkwara!
Teamdị otu- Ikpokọta ndi dike anọ ka ha gbusi ndi ojoo n’agha asọmpi nke 4vs4.
Vlanahụ mode- Na-alụso ndị iro niile ọgụ naanị, na-agbada onye iro ọ bụla, na-adị ndụ ruo na njedebe ịghọ ndị dike Stickman kachasị ike.
Ọgụ Stickman dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa. Ọ chọrọ Android 5.1 ma ọ bụ mgbe e mesịrị na ịzụrụ dị n'etiti euro 0,99 na euro 49,99.
N'èzí Storelọ Ahịa Play
Ọ bụrụ na ị na-achọ Dragon Ball ọgụ egwuregwu, dị ka ị pụrụ ịhụ n’isiokwu a, ọnụ ọgụgụ dị ka oke dị ka ọ na-abụghị dị ka ogologo dị ka Namco Bandai adịghị nzọ na nke a genre nke egwuregwu. Ihe ngwọta kasịnụ bụ site na gaa na uzo ozo na Storelọ Ahịa Play dị ka Aptoide y APKPure, webata Dragon Ball wee hu otutu onu ogugu di na isiokwu a.
Niile aha dị na ụlọ ahịa ndị a, nwebisiinka nwere ike ọ gaghị adị na Storelọ Ahịa Play. Ọ dabara nke ọma, usoro iji wụnye ngwa na gam akporo ekwentị dị mfe dị ka enyere ntinye nke faịlụ ndị amaghi.
Ozugbo anyị nyeere ndị ntinye nke faịlụ amaghi (ya bụ, ha esighi na Storelọ Ahịa Play) naanị anyị ga-etinye egwuregwu ahụ ozugbo na ihe nchọgharị ma ọ bụ ngwa anyị ji budata ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Ise egwuregwu kacha mma nke Dragon Ball maka gam akporo